Ukonwaba Ekhaya | January 2022
Ukuhlala + Amagumbi Osapho
Iipuzzle ezili-11 eziBalaseleyo ze-3D zaBantu abaDala- Iipuzzle ze-3D ezipholileyo zokuThenga kwi-Intanethi
Abalandeli be-3D puzzle bayakuthanda ukwakha ezi ndlela, ukusuka kwiimodeli ezinembali ezinje ngeBig Ben kunye neTitanic ukuya kwiifantasy replicas ezifana neWinterfell ezivela 'kuMdlalo weZihlalo zobukhosi.'
I-DIY Tie-Dye Face Masks - Nantsi indlela yokwenza iMaski yakho eDayi-eDayiweyo
Nazi zonke iimpahla kunye neengcebiso ozifunayo ukuze uzenzele (ubukhulu becala kwi-trend) iimaski zobuso zedayi yobuso kweli hlobo.
Iingoma ezi-50 ezigqwesileyo malunga neKhaya kunye neeDolophu zokuDibanisa kuLuhlu lwakho lokuDlalwayo
Ukusuka kwilizwe ukuya kwi-R & B ukuya kwi-rock, siqokelele iingoma zethu ezingama-50 esizithandayo malunga nekhaya elibhiyozela apho uvela khona nalapho ubeke khona iingcambu.
Iiseti ezili-10 zeeSwidi eziGqwesileyo kwiYard yakho 2021-Ezona ziPlasetshi ziBalaseleyo
Guqula iyadi yakho yangasemva ibe yindawo yokudlala yabantwana bakho ngezi seti zokujinga kunye nokudlala iiseti, zonke ziyafumaneka ukuze zithengwe kwi-Intanethi kwiWayfair, kwiDepho yaseKhaya naseWalmart.
Amaphepha okuhlamba ahluke kakhulu kuneThawula, kwaye siya kuchaza ukuba kutheni
Ingxoxo ye-Twitter phakathi kwamashiti okuhlamba kunye neetawuli zokuhlamba isikhuthazile ukuba sihlule umahluko phakathi kwamashiti okuhlamba kunye neetawuli zokuhlamba.
Inyanga enkulu yeWorm Worm ka-2019 iyenzeka kungekudala
Eyaziwa nangaphantsi kwamagama afana ne-Crow Moon, i-Sap Moon, i-Sugar Moon kunye ne-Lenten Moon, i-Full Worm Moon yinyanga yokugqibela yasebusika kwaye ibonisa ukuqala kwentwasahlobo-ekugqibeleni ifikile! Iintshulube zomhlaba ziqala ukubonakala, kungoko igama. Inyanga epheleleyo ikwayinto enkulu, ethetha ukuba iya kuba yeyona ikufutshane noMhlaba ngelo xesha kunokuba yayiyinyanga yonke kaMatshi.
Le $ 8 ye-Gingerbread Chicken Coop Kit iyinto entle kakhulu
I-Gingerbread Chicken Coop Cookie Kit ngophawu lwento ethi Yenza Unyango inakho konke okudingayo ukuze uyile ifolokhwe yeyona isikiweyo, inkukhu etyiwayo oyibonayo.
Nceda ume ngeziCwangciso zoMgangatho oVulekileyo
Ngama-1990, abakhi baseMelika baqala ukucacisa isicwangciso somgangatho ovulekileyo, bajonga amagumbi ahlukeneyo ngokubhekiselele kwiindawo ezininzi. Kutheni le nto iindonga kuye kwafuneka zibe lutshaba?
Kutyhilwa 'iindawo zokuThengisa' eziZona zibalaseleyo -Awona Magumbi 'okuThengisa' angalibalekiyo
Ezi 'Zithuba zokuThengisa' zezinye zezona zinto zingalibalekiyo kwaye zibi kakhulu kwimbali yomboniso.
Iikiti ze-Needlepoint eziPhambili zabaQalayo - Iikiti ze-Grandmillennial Needlepoint
Nokuba ungumthungi wokuqala okanye awukayichongi inaliti yakho okwethutyana, ukuqala iprojekthi entsha yenaliti kunokubonakala kunzima. Kodwa ungavumeli ukuba oko kukuthintele: I-Needlepointing ilula ngokulula-ungasathethi ke ngokuphelisa uxinzelelo -sakuba ufumene i-hang enye okanye ezimbini ezisisiseko. (Cinga nje ngokupeyinta ngamanani, kodwa ngentambo!) Ukuba awuqinisekanga ukuba ungaqala ngaphi, ukubheja kwakho okusemandleni kukubamba ikhithi yenaliti equka i-canvas epeyintiweyo, inaliti kunye nemisonto, eya kuthi ithathe uqikelelo yokukhetha izixhobo ngokwakho. Kwaye hleze ukhathazeke ngokuba ukhetho lwakho kuphela luya kuba yinjana okanye ingelosi, siqokelele ezinye zezinto esizithandayo kunye neeteksi zethu ezizezona zikhulu kakhulu kunegogo.
Abagwebi bamaGumbi okuGcina iiNdawo zangasemva kwiiNdlela zeHilarious
Igumbi lokuRekhtha kunokuba yeyona nto ilungileyo ukuphuma kwindawo ekutshixwayo kuyo. Oko kwasungulwa embindini ka-Epreli walo nyaka, iakhawunti yeTwitter yeRoom iqokelele ikota yesigidi sabalandeli ngesigwebo sayo esine-Zoom, i-Skype, kunye ne-back back backs.
Ama-45 eeNdawo eziQhelekileyo zamaKhaya-Amazwi aMnandi malunga neKhaya eliSwiti
Akukho ndawo ifana nekhaya. Ezi zicatshulwa zasekhaya zifaka uxolo lwangaphakathi sonke esivakalelwa kwindawo esiyithandayo.
Le EZ Inflatables yoLuntu iBillion Bounce Indlu ngokuqinisekileyo iyaphambana
'Lixesha lemidlalo yasemva kwendlu kwaye ndithatha zonke iingcebiso malunga nemibono emitsha yokongeza kumxube kule mpelaveki yeSikhumbuzo. Ngokucacileyo ndiyawuthanda umdlalo okhuphisanayo womngxunya wombona okanye umjikelo weklasikhi we-badminton nje ngomntu olandelayo, kodwa yintoni ongayithandiyo ngomdlalo omtsha onomdla? Xa ndadibana nesi sigebenga se-EZ Inflatables Human Billiard Bounce House, NDAKHUSELWA.
Igumbi lokulala eliyiNtloko alinakulungelwa kwezopolitiko-abaYili kwikota yokuGcina eyiNtloko
Abanye abayili, abayili bezakhiwo, abaphuhlisi baya kwikota echanekileyo yezopolitiko kwelona gumbi likhulu endlwini.
I-9 yeZindlu eziHloniphekileyo eziHloniphekileyo onokuzityelela ngeHalloween 2020
Ukusuka kwindlu yokwenene ehlala abantu abangasekhoyo ukuya kwintolongo yangaphambili, nazi iindawo ezilungileyo onokuzityelela malunga neHalloween.
21 Imibongo yoSuku lweeValentine eziBalaseleyo- isiBongo sakuDala kunye nesiNje sothando
Fumanisa eyona mibongo yothando ifundwayo ngoSuku lweValentine, ukusuka kwezothando kunye ne-steamy ukuya kwi-platonic kunye nooyise, kwaye ukusuka kabuhlungu kunye nokukrakra kube mnandi kwaye kumnandi.
Izinto ezingama-24 zokuzonwabisa ezenziwayo kusuku olunethayo nabantwana (okanye nguwe)
Ngaba ujonge into yokwenza xa imozulu imbi? Nazi izinto ezingama-24 ezimnandi zokwenza ngemvula, nokuba uwedwa, nabahlobo, okanye abantwana.
Uyenza njani iDayi yeNdalo yeTie-Dye- Iidayi ze-DIY zokwenza iTie-Dying
Idayi ibuyile ehlotyeni! Nantsi indlela yokwenza iidayi zendalo kwiziqhamo, imifuno kunye neentyatyambo zezobugcisa obungenatyhefu bokudaya kunye nabantwana.
Ezi Vidiyo zokuKhwela ngokuBonakalayo zizisa uMlingo weDisney ekunene kwisingqengqelo sakho
Kungenxa yokuba zonke iipaki zeDisney zivaliwe okwangoku ngenxa yokuqhambuka kwe-coronavirus oko akuthethi ukuba awungekhe ufumane umlingo weDisney ekhaya. Ngenisa ukukhwela okubonakalayo.
Eyona Miboniso ye-HGTV idumileyo ngurhulumente
Uphononongo olwenziwe yiNkampani yeMichigan Bulb luye lwajonga ukuba yeyiphi imiboniso ye-HGTV ethandwa kakhulu kuwo onke amazwe, kwaye kuvela ukuba iintandokazi ziyahluka kwilizwe liphela.
ilenga ifoto eludongeni
lungiselela isakhelo amakhaya
izimvo zeekhabhathi ezingwevu zekhitshi